Ihe ịga leta Toledo | Akụkọ Njem
Ihe ịga leta Toledo
Maria | | Spain obodo, Toledo
Toledo bụ otu n'ime obodo kachasị mma na nke kacha mma echekwara na Europe. Akpọrọ ya 'obodo nke ọdịbendị atọ' n'ihi ibikọ ọnụ nke narị afọ gara aga n'etiti Ndị Kraịst, ndị Juu na ndị Arab, nnukwu akụnụba pụtara na kwa afọ na-adọta ọtụtụ puku ndị njem si n'akụkụ niile.
Ihe omuma ihe omuma a na Toledo mere ka isi obodo oge ochie nke Spain ghọọ ulo ngosi ihe omuma n'uwa, nke UNESCO kwuputara na World Heritage Site. Soro anyị na njem a n’oge iji chọpụta ihe ị ga-ahụ n’otu n’ime obodo ndị kachasị maa mma na ndịda Europe.
1 Katidral nke Santa Maria
2 Ebe obibi ndị mọnk nke San Juan de los Reyes
3 Alcazar nke Toledo
4 Santa Maria di ọcha
5 Àkwà Mmiri Alcantara
6 Ogige Zocodover
7 Chọọchị Santo Tomé
Katidral nke Santa Maria
Ọ bụ masterpiece nke Spanish Gothic na otu n’ime ebe ndị dị mkpa ịga leta Toledo. Mputa ya dị egwu ma nwee ihu atọ: nke bụ isi (nke a na-achọ mma ebe ụlọ elu dị elu 92-mita pụtara), Puerta del Reloj (nke ochie facade) na Puerta de los Leones (nke ikpeazụ a ga-ewu ).
Seehụ n'ime ime ọ dị mkpa ịzụta tiketi. Ihe kachasị mma bụ ịzụta nke zuru oke ebe ọ na-enye gị ohere ịga leta cloister na ịrị elu ụlọ elu ahụ, site na ebe enwere echiche dị egwu nke obodo ahụ. Maka ihe a niile, anyị ga-agbakwunye na ị ga-enwe ike ịhụ ọmarịcha ebe ịchụàjà, ụlọ isi, windo ndị nwere ntụpọ, ụlọ nsọ Mozarabic, akụ, ebe ngosi ihe mgbe ochie na sacristy na New King Chapel ebe foduru nke ọtụtụ ndị eze obodo ahụ zuru ike. usoro ndị eze Trastamara.
Ebe obibi ndị mọnk nke San Juan de los Reyes
E wuru ebe obibi ndị mọnk nke San Juan de los Reyes na arịrịọ nke Ndị Ọchịchị Katọlik na 1476 ma a na-ewere ya dị ka ihe atụ kachasị mma nke ụdị Elizabethan Gothic. North facade mara mma mana nke kachasị mma dị n'ime ya: akwụkwọ akụkọ ya abụọ nwere ihe osise na ihe ịchọ mma nke na-agwakọta ụdị Gothic na Mudejar. N'elu ụlọ elu, aha pụrụ iche kwesịrị ka ụlọ elu mara mma ma dịrịrịrị n'ime ụlọ ụka ahụ nnukwu ebe ịchụàjà nke Holy Cross.
Alcazar nke Toledo
N'akụkụ kasị elu nke obodo ahụ, ụlọ na-apụta na panoramic ọ bụla nke Toledo: Alcázar ya. Ekwenyere na na ebe a enwere ụdị ebe e wusiri ike dị iche iche kemgbe oge Rom nyere ezigbo ọhụhụ ebe mmadụ nwere sitere ebe a.
Ka oge na-aga, Emperor Carlos V na nwa ya nwoke Felipe II weghachitere ya na 1540. N'ezie, onye mmeri a bụ Hernán Cortés bụ onye Carlos nke Mbụ nabatara na Alcázar mgbe o merisịrị alaeze Aztec. Ọtụtụ narị afọ ka e mesịrị, n'oge Agha Obodo Spain, e bibiri Alcázar nke Toledo kpamkpam ma wuo ya ọzọ. Ugbu a ọ bụ isi ụlọ ọrụ nke Museum Museum ka ị hụ ihe dị n'ime ya ị ga-azụ tiketi.
Otú ọ dị, ịbanye n'Ọbá akwụkwọ nke Castilla-La Mancha, n'elu ụlọ elu nke Alcázar nke Toledo, bụ n'efu ma nwee echiche dị ịtụnanya banyere obodo ahụ.
Santa Maria di ọcha
Na ochie ochie ndị Juu na Toledo bụ ihe a synagogue ghọrọ a ụka na aha Santa María la Blanca. Ọ bụ ụlọ Mudejar wuru na 1180 maka ofufe ndị Juu nke pụtara ìhè maka mpụga ya ma e jiri ya tụnyere ime mara mma nke agba ịnyịnya, ogidi octagonal na mgbidi ọcha.
Synagolọ nzukọ ọzọ bara uru ileta bụ ụlọ nzukọ Tránsito nke narị afọ nke XNUMX, nke nwere ụlọ ihe ngosi nka nke Sephardic n'ime ya ma nwee oke osisi kpuchie osisi kwesịrị ka a hụ ya.
Àkwà Mmiri Alcantara
Mostzọ kachasịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịstii na-enwekarị nke ụzọ ma ọ bụrụ na i ji ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ oloko rute bụ ịgafe akwa mmiri Roman nke Alcántara. O wuru ya n’elu Osimiri Tagus n’afọ 98 ma ọ fọ obere ka ọ bụrụ narị mita abụọ na narị abụọ na asatọ. A raara onwe ya nye Central Trajan na ndị gbara ya gburugburu bụ ndị kwadoro ya.
Ọ bụrụ na akwa mmiri dị na Toledo na-amasị gị, ị kwesịrị ịma akwa San Martín site na mgbe ochie, nke gafere Osimiri Tagus mana ọ dị n'akụkụ nke ọzọ nke obodo ahụ.
Plaza de Zocodover, ebe akwara na isi square ruo ọtụtụ narị afọ, bụ otu n'ime ebe kachasị ikuku iji hụ na Toledo. Ọ bụ ogige nwere oghere nke ụlọ ndị Castilian gbara gburugburu ebe ahịa ndị gara aga, ehi, ọgụ, ... nke mbara ala ya. Na mgbakwunye, ebe a bụ ụfọdụ n'ime ụlọ ahịa na-ere kacha mma marzipan na Castilla-La Mancha. Nweghị ike ịhapụ n’enweghị ya!
Chọọchị Santo Tomé
Na chọọchị a bụ otu n'ime ọrụ El Greco kachasị ewu ewu: "The Burial of the Count of Orgaz." Iji hụ ya, ị ga-akwụ ụgwọ tiketi iji banye n'ime. Emere eserese a maka nsọpụrụ onye ugwu a bụ onye enyemaka dị mkpa na Toledo wee pụta maka ọrụ ebere ya, na-enye aka na nwughari nke ụka parish dị ka nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Toledo » Ihe ịga leta Toledo
Obodo nke Soria